Hargeysa: Bulsho U Baahan Gacan Iyo War La'aanta Dadka Ay La Nool Yihiin | Somaliland Mental Health Support Organisation
Gobolada iyo degmooyinka dalka Somaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa si aad ah ugu soo badanayay cudurka dhimirka.
Bulsho marka laga yimaado cusbitaalka guud ee Magaalada Hargeysa oo dadkan lagu xanaaneeyo, ma jirto meel kale oo dadka dhimirka wax ka qaba lagu xanaaneeyo.
Sidoo kale Magaalooyinka dalka ayaa waxa jira xarumo dadku ay gaar u leeyihiin oo lagu xanaaneeyo dadka dhimirka wax ka qaba.
Hadaba si aanu wax badan uga ogaano, waxa aanu isku dayanay in aanu dadweynaha ku dhaqan Magaaladda Hargeysa qaarkood wax ka waydiino bal sida ay u arkaan dadka tirade badan ee ku dayacan jidadka Magaalada Hargeysa.
“Magacaygu waa Maxamed Aadan, walaahii walaalo hadii aan is idhaahdo ka jawaab su’aasha aad i waydiisay ee ah sidee baa dadkeenan dhimirka wax ka qaba ee u baahan in la xanaaneeyo wax loogu qaban karaa, waxa ay ila tahay waxa ay u baahan yihiin in ay dadkeenu isku tashadaan.
Runtii hadii la isku tashado oo ay umada reer Somaliland wax wada qabsato, waan hubaa in ay wax badan ka qaban karaan dadka walaalahood ah ee ku dhibaataysan jidadka ee aan ka xaroonayn roobka, cadceeda iyo waliba dhaxanta” ayuu yidhi.
Akhriste Maxamed oo keli ah maaha, laakiin dadka badankiisu waxa ay la qabaan dareenkan.
Marka laga yimaado in ay dadka badankoodu laabta ka neceb yihiin dhibka haysta walaalahooda ay duruufaha badani ku gedaaman yihiin, ma jirto wax ay ka qaban karaan.
“Walaahi walaalo aad baan uga murugoodaa marka aan arko walaalaheenii aynu shalay la qoslaynay, la faraxsanayn oo maanta caynkan ah.
Runtii ilmo ayaa indhahayga isku soo taagta, waxa aan diyaar u ahay in aan wax kala qabto cidii iyadu halgankaasi inoo bilawday……” Waa erayo ay aan ka guntay mid ka mid ah hablaha wax bartay oo aan wakhtigaasi kula kulmay jidka weyn ee Badhtamaha Magaaladda Hargeysa, waxaanay magaceeda iigu soo koobay Farax.
Si kastaba ha ahaatee bulshada reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan, waxa looga baahan yahay in ay isku tashadaan isla markaana xal waara ka gaadhaan sidii bulshada walaalaheen ah ee iyaga rabbi subxaana wa tacaalaaye uu ka qaaday xiskoodii wax loogu qaban lahaa.
Previous Previous post: Ururka dhimirka ee Somaliland mental health support oo shahaado sharaf ka helay ururka weyn ee Somaliland community London
Next Next post: The dire state of mental illness care in Somaliland